Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY 30/10/2017
INTY SY NDAY 30/10/2017
Tsy ho afa-bela
Isan’ny vaovao voaresaka tamin’iny faramparan’ny herinandro lasa teo iny ny fisian’ny fanangon-tsonia eo amin’ireo solombavambahoaka mba hangatahana latsa-bato fitsipaham-pitokisana ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier. Raha ny akom-baovao re aloha omaly dia efa mananika ny 70 ny isan’ireo solombava nanao sonia. Misy fetr’isa takiana moa vao azo heverina fa feno ny fepetra ahafahana miroso amin’io latsa-bato fitsipaham-pitokisana io. Ny takian’ny lalampanorenana dia raha ny antsasaky ny solombavambahoaka mandrafitra ny Antenimierampirenena no manao sonia dia efa azo tanterahina 48 ora aorian’ny nametrahana ilay fangatahana eo anivon’ny birao maharitry ny Antenimierampirenena ny latsa-bato.
Raha ny tsikaritra aloha dia ho tratra io isa 76 io satria tsy vitsy amin’ireo solombvavambahoaka no hirona amin’io fitsipaham-pitokisana ny governemanta io.
Tsy ho afa-bela izany ny governemanta Mahafaly Olivier raha izany.
Ny solombavambahoaka Hvm no fantatra fa tompon’ny finiavana hirosoana amin’ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ankehitriny. Ny avy amin’ny Mapar sy ny Tim izay isan’ny maro an’isa ao Tsimbazaza dia azo antoka fa hanohana an’io fitsipahana io na fantany aza fa avy eny Mavoloha ny hevitra hanaisorana an’i Mahafaly Olivier Solonandrasana. Tsy hanao toy ny tamin’ny 1994 ny Mapar sy Hvm eto. Tamin’ny 1994 mantsy, fony ny Me Ravony no praiminisitra, dia ireo solombavambahoaka avy amin’ny Mfm, Famima, Leader Fanilo, Rpsd… izay nanana olona tao amin’ny Governemanta no nitaky ny hitsipahana ny governemanta Ravony, saingy tsy nanohana ny avy amin’ny Hery Velona, dia tsy nahomby ilay izy. Izany hoe karazan’ny latsa-bato fangatahana fitokisana (vote de confiance) no nitranga.
Fa ny antoka ifotoran’ny sain’ny mpanara-maso aloha dia hoe « governemnta toa inona no mety hasolon’ny filohampirenena ny ankehitriny ? » Azo antoka fa tsy maintsy mifototra amin’ny fifampiraharanana io, ary ireo vondrona parlemantera manaiky hanao sonia ka hitsipa-pitokisana ny Governemanta Mahafaly Olivier dia hitaky ny anjarany amin’ny ho fandrafetana ny governemanta vaovao raha mahomby ilay fitsipahana.
Miankina amin’ny ho fahafahan-dRajaonarimampianina miara-mandrafitra ny governemanta hajorony amin’ireo hery politika hafa izany io.
Etsy ankilany, mety tsy hanaiky hiditra ao anatin’ny governemanta koa anefa ireo hery hafa satria hoe hiara-maimbo amin’i Hery Rajaonarimampianina ao ve, indrindra fa efa herin-taona sisa hananana izao fitondrana izao. Etsy ankilany, misy koa ny mieritreritra fa tokony hisy fifampifehezina kosa ny fandrafetana ny governemanta ho avy satria tsy mety raha toa ka afaka roa volana dia hoesorin’ny filohampirenena izay olona manahirana azy ao anatin’ny governemanta.
Hatreto koa izany aloha dia mbola tsy ho mora ho an’ny filoha Rajaonarimampianina ny avy hatrany dia hisioka satria tsy mbola tafavoaka ny ala izy. Tsy azo hadinoina mantsy fa ny filohampirenena mihitsy koa, ho an’ny olona sasany, no tokony hatsahatra amin’ny asany satria loharanon’ny tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana. Na ny governemanta ange izany na ny filohampirenena dia samy tsy misy mahavita azy e ! Samy tsy misy ho afa-bela ireo, raha hadihadiana ny toe-draharaha.